सुवास फेरि मगमगाउला कि नाइँ
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिसुवास फेरि मगमगाउला कि नाइँ
राजनीतिक पण्डित, नागरिक–समाजका अगुवा अनि कानुनका धेरैजसो विद्यार्थीहरूले संसद् विघटनलाई गैरसंवैधानिकमात्र होइन ‘ओलीगमन’ यात्राको बिर्सनलायक नजिर मानेका छन् ।
तर कन्टिर–बाबू भने यस मुद्दामा बडो सकसमा छन्– कति बोल्ने के बोल्ने ? उनी हिन्दी भाषाको पुरानो सिनेमा ’कसौटी’ र त्यसको सदावहार पात्र प्राणलाई सम्झिँदै एउटा गीतको पङ्क्ति गुनगुनाउँछन्, ‘… हम तो कुछ नही बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगो कि बोलता है !’
त्यसो त उनी बोल्या–बोल्यै छन् । अरूहरूले पनि बोल्या छन् । सबैले आफ्ना तालुकवालाको तालुको सेवा गरेकै छन् । ओल्बालाई कसैले ठीक त कसैले बेठीक भनेका छन्, भन्दै छन् ।
तर ती नेवाङ थरका एकजना इलामे छन् नि, तिनी अहिले बडो सकसमा छन् । उनी नाम चलेकै वकिल पनि हुन् भन्ने कन्टिर–बाबूलाई थाहा छ । विचरालाई संविधानबारे कानुनी र संवैधानिक धारणा व्यक्त गर्न उनीमाथि बडो दवाब छ । संविधानसभाका सभामुख हुँदा अहिलेको संविधान विश्वकै उत्कृष्टमध्येको एक हो भनेर दावी गर्ने यिनै हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् भनेर विगतमा शायद यिनले पनि कतै भनेका हुन् ।
तर सामाजिक सञ्जालमा अहिले विचराको उछित्तो काढिएको देखेर कन्टिर–बाबू उदेक छन् । हरे राम … ! हेर आफैँले बोलेको कुरा अहिले आफैँलाई काउसो । कन्टिर–बाबूलाई पनि सामाजिक सञ्जालको बहस रुचिकर लागेको छ ।
हो रहेछ, सुवास साँच्चिकै सुवास भइदिँदा कसैगरी लुक्न सक्दैन रहेछ । विगतको सुवास अहिले चारैतिर मगमगिएको हो ।
कन्टिर–बाबू नेवाङजीको पिरलोको अनुमान त गर्न सक्छन् तर चुकचुकाउनुबाहेक अर्थोक केही गर्न सक्दैनन् । विचरा, ठूलो धर्मसङ्कटमा छन् । संसद् विघटनको, समर्थन गरौँ संविधानको मर्म मर्ने, विरोध गरौँ ओल्बाको बक्र–दृष्टिमा परिने ।
यस्तो बेलामा के गर्नु उचित होला नेवाङ सर ? कन्टिर–बाबूलाई कुनै आइडिया फुरिरहेको छैन !
ओलीगमन गैरसंवैधानिक सुवास